Fanosorana Nihoson-drà Sahady Taorian’ny Nahavitàny · Global Voices teny Malagasy
Fanosorana Nihoson-drà Sahady Taorian'ny Nahavitàny
Nivoaka ny 26 Janoary 2014 2:52 GMT
Taorian'ny fifidianana fihodinana faharoa natao tamin'ny 20 Desambra 2013, hahitàna izay ho filoha hitondra voalohany ny Repoblika Fahaefatra eto Madagasikara, dia nivoaka ho mpandresy i Hery RAJAONARIMAMPIANINA (53%), nanoloana an'i Jean Louis Robinson. Nisy ny lanonana ara-pitsarana nanetriketrika nanatanterahany ny fianianany omaly 25 Janoary 2014, tetsy amin'ny kianjabe Mahamasina.
Lanonana tanaty firavoravoana ho an'ireo maro tonga nanotrona tao izy iny, saingy ny tany tsy ilaozan'adala hoy ny Ntaolo Malagasy. Mbola misy ireo tsy maty voalavo an-kibo ka mitetika fanakorontanana eto amin'ity firenena ity raha efa tokony ho zavatra hafa sy ny fampandrosoana no ifantohan'ny saina.
Tokony ho tamin'ny 7 ora, ny alin'iny Sabotsy iny, dia nisy olon-tsy fantatra nanipy grenady tamin'ireo olona teo amin'ny fiandrasana fiara fitateram-bahoaka teo Anosy, tandrifin'ny tranoben'ny Antenimieran-doholona. Very maina ny ezak'ireo olona niezaka ny nanenjika ilay nahavanon-doza, raha ny tatitra hita etsy sy eroa no raisina. Fa ny mampalahelo dia tsy vitan'ny hoe naharatràna olona maro ilay hetsika fampihorohoroana, fa namoizana aina mihitsy. Raha ny heno hatreto dia tsy latsaky ny 3 (zaza 2 taona ny iray) no maty, ary efa ho 30 mahery no maratra mafy, misy amin'ireo no mbola tena atahorana ny aminy.
Sary nindramina tamin'i Rossy
Torana teo am-pahafantarana fa isan'ireo niharan-doza ny havany. Sary avy amin'i Rossy
Tetsy Mahamasina anefa, dia naneho ny fahavononany hanaja ny valim-pifidianana sy ny fanambarana ofisialy nataon'ny Fitsarana Avo momba ny Fifidianana ny kandida nitàna laharana faharoa tamin'iny fifidianana fihodinana faharoa iny, Jean Louis Robinson, ary nilaza ihany koa ny nananganany ny Comité National de Coordination de l'Opposition Légale (CNCOL) izay izy Dr Jean Louis Robinson no mitarika azy. Izy ity dia hitana andraikitra:
– Mitsikera sy manitsy ny zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fitondrana
- Miaro ny tombontsoan'ny firenena mba hiverenan ny famatsiambola iraisam-pirenena hivoan'i Madagasikara ao anatin'ny krizy
- Miaro ny fitakiana ny fodian'ireo sesitany politika rehetra ka isan'izany ny Filoha RAVALOMANANA.
- Miaro ny fitakiana ny famoahana ireo gadra politika(miisa 23).
Koa satria moa efa lalim-paka ny krizy izay nisy teto Madagasikara nandritry ny 5 taona, dia tsy mendrika ho an'ny vahoaka Malagasy ny hitohizan'izany, Ka noho izany, dia ho avy hanatrika ny investiture rahampitso Asabotsy 25/01/14 eny Mahamasina ny Dr Robinson Jean Louis amin'ny maha filoha mpitarika ny CNCOL azy, ary koa fanomezantanana ho an'i MADAGASIKARA. Manao antso avo ho an'ny mpanao politika izay milaza azy ho mpanohitra (antoko politika izay manana antoko mijoro ara-dalana) hifanohana amin'ny ANTOKO AVANA. Aza misalasala ny manantona ny QG AVANA Ambohimiandra.
Andron'ny fiovàna izao hoy ity hafatra iray ity:
Tanya Ranaivo […] aza mampitatra resaka intsony, fanarenana izao, matoa JLR tonga any dia hampiova fijery sy fomba fanao tsara ho an'ny tanindrazana,[…]. AOKA IZAY!!
Ity iray ity koa dia mbola manana fomba fijery tahaka izay ihany:
Jajah Michel […] anjaran'ny mpiandany be fahatany ny manao fanamarihana ! Izany kabarin'ny Filoha Rajaonarimampianina izany no kabarin'ny olon-kendry! aoka tsy entina @ fifankahalàna sy fanompoana olona intsony ny vahoaka! Rehefa tonga ny 2018 dia mitabatabà ianareo tahak ny nataonareo t@ ity tetezamita ity fa fotoanan'ny fanarenana izao ary fampiraisam-pirenena ! Rehefa tsy vitan'i Andry Rajoelina sy Ravalomanana dia aleo ataon'ny Filoha Rajaonarimampianina sy Dr Jean Louis Robinson ny fanehoana fihavanana sy firaisan-kina marina! MBA HO HERY VAOVAO HITONDRANA AN'I MADAGASIKARA ANY @ FAMPANDROSOANA MAHARITRA !
Tsy ilaozan'izay faminavinàna ny ho fiainam-pirenena rahampitso sahady anefa ny fanehoan-kevitra nandritra ny andron'ny omaly, raha nisy olona iray nanakiana ny fanehoankevitry sy fanindrahindràna olona nataonà mpanao gazety iray diso fantatra loatra eo amin'ny haino aman-jery akaiky ny fitondrana tetezamita :
Andry Eric Ravoniharrison Mahavariana mihitsy ity culte de personnalité ity! Mba olona najaiko sy neritreretiko ho manana jugeotte ianao Mr Maurice Tsihiavonana, indrindra nandritra ny evenement 2002!
Ny fankahalana tokoa mahatonga ny olona hiteniteny foana an!
Fa vahoaka avy aiza moa izany ireo ao Mahamasina ireo? fa nahazo firy % i Andry Rajoelina (sy ny MAPAR) teto Antananarivo!
Dia ahoana ny fiheveranao ireo vahoaka tsy manatrika ao Mahamasina sy ireo tsy nifidy MAPAR ( AVahako tsara ilay MAPAR sy Ingahy Rajaonaromampianina satria ho hitantsika eto @ izay fa hisaraka ny lalan'izy ireo ato ho ato)
Tsy misy fotony ve izany ireo vahoaka 47% ( raha tsy hiresaka halabato isika) sy ireo vahoaka 49% tsy tonga nifidy fa ianareo mpitaty rà-kenan-DRajoelina ihany no tena vahoaka????
Mba dinihina ihany ny zavatra lazaina indraindray fa ny faux débat sy ny esprit partisane apetrakareo tahaka izao no tena manimba ity firenena ity
Ho an'ny sasany dia ity filoha vaovao ity angamba no handimby ny firehan-kevitr'i Nelson Mendela:
Jajah Michel Aza mba lotoina kosa ny Filohantsika vaovao e ! Tokony hiova amzay ny langage VIVA satria ny filoha vaovao dia RASSEMBLEUR , eny fa na dia ireo tsy nitovy hevitra taminy aza tolorany tànana! JE PREVOIS UN VRAI MANDELA GASY
Miantso fifanomezan-tànan'ny samy Malagasy kosa ity hafatra iray ity:
Rab Dan diso adversaire isika mifankahala kanefa samy malagasy fa ny tena fahavalontsika dia ny zavatra nampahantra an'i Madagasikara hatramin'ny 1960 ka tokony hiray hina isika. tadidio koa fa mihatsaravelatsihy ny communauté internationale ireo fa tsy mitady ny hampandroso antsika. aleo isika hahiratra amin'izay fa ny tsy variana mankahala olona fotsiny. […] mila manova toe-tsaina isika tsirairay avy, ovaina ny fanaovana politika, tokony hanana honneteté intelectuelle ireo avaram-pianarana, tokony haka modèle an'ireo pays émergant isika fa tsy hiankin-doha be sy hitrosa foana amin'ny fmi sy BM, mila miady amin'ny redevance minière mba tsy ho 1% fotsiny, hatao izay mampatanjaka ny vola malagasy fa tsy dévalué foana
Hoy ity mpaneho hevitra ity hoe:
Andry Eric Ravoniharrison Mino aho fa olokendry ny President Rajaonarimampianina ka hahay hanavaka ny tsiparifary rehetra araka ny teniny sy ny kabariny androany.
Ilaina ny fanilihana ny extremiste rehetra na avy aiza na avy aiza ( clan d'extremiste Ravalomanana et clan d'extremiste Rajoelina ) mba hahazona manatanteraka ilay firaisankinampirenena,, fifanomezantanana sy fifamelankeloka , aniisan'ny votoatin'ny kabarin'Andriamatoa Filoha androany!
Farany, efa lasa tokoa ny zavatra taloha, ka aoka havaozina ny zavatra rehetra. Havaozina ny fomba fisaina, ny fomba fijery, ny fomba fifanakalozana hevitra, ary ho alevina impito mandifotra olona ity fisolelahana amin'olon-tokana sy ny fitsaratsaram-poana lasa diso lalim-paka amintsika Malagasy ity. Samy nanameloka iny herisetra iny avokoa na ny andaniny na ny ankilany. Iza izany no tao ambadik'iny?
Tsetsatsetsa tsy aritra : Tsaroana manokana anadroany 26 Janoary ny andron'ny Alatsinainy mainty tamin'ny taona 2009
15 Janoary 2021Mozambika
21 Septambra 2019Fampandrosoana
22 Avrily 2019Afrika Mainty